N'ogbe Galvanized trenchi / olulu mkpuchi Manufacturer na Supplier |Jintai
Aha ngwaahịa:Ihe mkpuchi nke trenchi/olulu galvanized
Ụdị Mkpọpu igwe anaghị agba nchara ma ọ bụ mkpuchi igwe mmadụ
Ogwe na-ebu ibu 25 * 3mm, 25 * 4mm, 25 * 5mm 30 * 3mm, 30 * 5mm, 40 * 5mm, 50 * 5mm, 100 * 9mm, wdg
Cross mmanya 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, wdg
Ihe onwunwe Q235
Ọgwụgwọ elu Mwụsa na-ekpo ọkụ galvanized
A na-emepụta grating ígwè site na iji ngwa ọkụ na nrụgide na-arụ ọrụ n'otu oge na ebe a na-ebu ibu na obe n'ebe nkwụsịtụ ha, na-ejikọta ha ọnụ.
1.Trench cover efere ewu dị mfe, ìhè arọ, ezi ibu ikike, mmetụta na-eguzogide, kama ehulata karịa ezumike, nnukwu nchụpụ, mara mma na inogide mgbe na-ekpo ọkụ itinye zinc ọgwụgwọ, corrosion nchebe, na ígwè mkpuchi efere enweghị atụ uru.
2.The larịị ígwè nke groove cover efere na-ebu (nkwado) ntụziaka, na ogologo nke larịị nchara na-ekpebi dị ka nnukwu oghere hapụrụ na uzo (mmiri ọma).
3. Dị ka ogologo nke trenchi (nke ọma mmiri), a na-ewere obosara ọkọlọtọ nke efere ahụ nke kwekọrọ na nhazi nhazi dị ka 995mm, a na-ahapụ ọdịiche dị n'etiti efere dị ka 5mm.
4.The ogologo nke trenchi (ọma) ihe na-erughị 1 mita kpebisiri ike site modulus.
5.Select ụdị nke ígwè grille efere dị ka obosara nke trenchi (ọma) na ibu ibu chọrọ.
6.Ọ na-atụ aro ka ịhọrọ ọkọlọtọ size trenchi mkpuchi efere maka imewe na-ewu, na ndị ọzọ nkọwa nwere ike hazie.
1.Ọ nwere ike iji maka flooring na elevators na walkways.
2.Ọ nwere ike iji mee ihe na mpaghara ndị chọrọ ịdị ọcha dị elu n'ihi na ọ dị mfe ihicha.Mgbe a na-asa ya, ọ nwere ike ịkpọ nkụ ngwa ngwa; n'ihi ya, a pụrụ iji grates mee ihe ozugbo emechara ya.
3.The arọ metal grating nwere ike iji na ebe nwere arọ ngwá si otú chebe ala.
4.Ebe ọ bụ na ọ naghị eyi ma na-adọka ngwa ngwa, ọ bụ nhọrọ dị mma maka ebe azụmahịa na-ebufe ma na-ebufe igwe dị arọ.
5.Ọ nwere ike iji chebe oke mmachi ebe n'ihi na ọ siri ike imebi.
6.Ọ nwere ike iji wụnye shelves na-ekpuchi manholes.
Ogwe ala nchara nchara, Galvanized Steel ntupu grating, Ogwe grating, Serrated Steel Bar grating, Ogwe ụzọ nchara nchara, Steel Bar grating,